Somali daily News – Haweeney Maxkamadda Ciidamada Qalabka Sida Ay Xukuntay Sanadkii 2014 ka oo Ku Geeriyootay Isbitaalka Xabsiga Dhexe
Haweeneydaan oo lagu magacaabo Deeqo Diraac ayaa Maxkamadda ciidamada Qalabka Sidda ku xukuntay 15 sano oo xabsi ciidan ah sanadkii 2014 iyadoo ay maanta ku dhex geeryootay Isbitaal ku dhex yaalla xabsiga dhexe ee Xamar, sida warbaahinta dowladda ay sheegtay.
Marxuum Deeqo Diraac, ayaa la xiray bartamihii sanadkii 2014, waxaana Maxkamadda ay ku eedeysay in ay caawin jirtay howlgallo ay fulin jireen rag gacan saar la lahaa Xarakada Al-Shabaab.
Ilal hoose oo ka tirsan Warbahinta dowladda Soomaaliya ayaa sheegatay in Marxuum Deeqo Diraac ay u geeryootay cudurka Macaanka ama Sokorta.
Xariga Deeqo, ayaa waxaa uu ka dambeyay kadib markii Maxkamadda ay ku eedeysay in ay hubka u heyn jiratay labo nin oo ku eedeysnaa dilkii Nafiso Cusmaan Salaad oo aheyd gabar ardayad ah kana qalan jabisay kulliyadda Caafimaadka ee Jaamacadda Soomaaliya, taasoo sanadkii 2014 lagu dilay agagaarka warshada Coca-cola ee magaalladda tani Muqdishu.
Maxkamadda ciidamada Qalabka Sida ayaa xukun dil toogasho ah ku ridday, labada wiil ee lagu eedeyay dilka Marxuumad Nafisa oo lagu kala magacaabi jiray Xasan Salmaan iyo Shaafici Cabdicasiis, waxayna sidoo kale Deeqo Diraac ay ku kuxuntay Maxkamadda 15 sano oo xabsi ciidan ah.
Xasan Salmaan iyo Shaafici ayaa horay u qirtay in ay mid waliba uu la dhacay bastoolad uu heystay marxuumad Nafiso.
Guddoomiyaha Maxkamadda Sare ee Ciidamada Qalabka Sida Liiban Cali Yarow ayaa ku riday Xukun Dil ah labadaani dambiile ee geystay Dilka Marxuumad Nafisa isagoo digniin u jeediyay dadka kale ee gacan saarka la leh Xarakada Al-shabaan in ay ka waan toobaan.